Astaamaha Webka: Naqshadeynta iyo Adeegsiga Talooyinka | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | Astaamaha
Shabakaddu waxay ka kooban tahay a cunsurro aan dhammaad lahayn, inkasta oo ay u shaqeynayaan si madax-bannaan, haddana waa inay daqiiqadda ugu dambeysa, u qabtaan dhammaan shaqadooda kooxdooda si wada jir ah intii suurtagal ah.
Asal ahaan tan waxaa loo sameeyaa si webka looga dhigo wax isdaba joog ah oo shaqeynaya. Ku saabsan yahay shaqo shaqsiyeed laakiin koox koox ah, oo ah wada shaqeyn ay siiso shaqsiyan shaqsiyad kasta, taasoo siineysa dabeecad shaqeynaysa websaydhka iyo dhammaan tirada badan ee howlaha dhexdeeda ah ee daqiiqad kasta la qabanayo.
1 Astaamaha webka, soo hel iyaga
4 Astaamo gaar ah
5 Astaamaha shabakadu waa cunsur aasaasi ah oo ku jira bog kasta
Astaamaha webka, soo hel iyaga
Waxay umuuqataa in waxyaalaha badan ee khuseeya howlgalka degellada ay xiriir dhow la leeyihiin naqshadeynta websaydhka, taas oo sabab weyn u noqon karta dhammaantood xirfadlayaasha naqshadeynta websaydhka ama xiiseynaya aaggan aqoonta ugu dambayntiina kobcisa mahadnaqa horumarka teknoolojiyadda ee tan gudaheeda ka dhasha fulinno cusub.
Dareenkan, waxaa jira waxyaabo badan oo door muhiim ah ka ciyaara naqshadeynta websaydhka, laakiin, qodobkan, waxay noqon doonaan astaamaha webka canaasiirta si loo tixgeliyo soo-gaadhista nuxurka bogagga. Caadi ahaan, waxaan xusi doonnaa qaar ka mid ah tilmaamaha loogu talagalay isticmaalkiisa iyo qaabeyntiisa, si akhristaha uu ula xisaabtami karo tilmaamahan markii la falanqeynayo a astaanta webka.
Astaamuhu waxay ka jawaabaan tixraac, sawir aad u gaar ah oo dadka u oggolaanaya ku xidho cunsurkan mashruuc dhan oo super ah.
Kani waa kiiska astaamaha warbaahinta bulshada, oo loo yaqaan icons-ka bulshada. Fasalkan astaanta ah ayaa isla markiiba la aqoonsan yahay, mahadnaqa xaqiiqda ah, aasaas ahaan, fikradda jiritaankoodu waa inay dhaliso xiriir ficil degdeg ah oo u dhexeeya macmiilka iyo shabakadda bulshada.
Fasalkan astaanta ahi waxay leeyihiin jidh aad u gaar ah, maaddaama fikraddu tahay in lagu hayo qaabab sawir oo taxane ah oo la soo bandhigi karo, taas oo u oggolaanaysa isticmaaleha sida ugu macquulsan degelkan noocan ah. Iyagu waa astaamo caan ah, taas oo muhiim u ah fasalkan xubno ka tirsan websaydhka bulshada.
Naqshadayntoodu waxay inta badan ku xirnaan doontaa nooca shabakadda ay rabaan inay la xiriiraan.
Noocyada noocan ah waxay ka jawaabaan qaabab badan oo aan ka heli karno baaritaanka dhexdiisa.
Dareenkan, qaabeynta kuwan waxay ku xirnaan doontaa inta badan nooca mawduuca ama macnaha guud ee lagu baarayo. Waxaa jira dhufto ee bixiya noocyo kala duwan oo badan astaamaha cilmi baarista, iyaga oo loo kala saarayo iyadoo loo eegayo macnaha guud ee ay la xiriiraan, iyadoo soo saareysa muuqaalo aad ugu badan macnaha guud ee loola dhaqmay.
Astaamo gaar ah
Fasalkan astaanta ah waxaa loo sameeyay habka ugu shaqsiyan macquulsan, iyadoo la tixgelinayo baahiyaha iyo macnaha websaydhka ay ku jiraan. Suurtagal maaha in la qeexoWaxay gebi ahaanba ku xirnaan doontaa baahida naqshadeeye ama macmiilka mas'uulka ka ah bogga.
Astaamaha shabakadu waa cunsur aasaasi ah oo ku jira bog kasta
Iyaga dhexdooda waxaa suurtagal ah in lagu sharraxo dhaqdhaqaaqa isdhexgalka kaas oo, xeelado gaar ah, ay ku sii hayn doonaan adeegsadayaashu gacan joogto ah oo leh barmaamijka noocan ah. Macluumaadka noocaas ah, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo dhinacyada kala duwan ee naqshadeynta astaanta webka.
Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo baahiyaha macmiilka, si qaab ah inuu naqshadeeyaha u soo bandhigo badeecad qancisa dalabyada noocaan ah, soo saar wax soo saar hufan oo loogu talagalay aagagga shaqada.
Astaamaha Webka waa cunsur muhiim u ah horumarinta boggaga internetka Waana taas mahadaas awgeed, waxaa suurtagal ah in sifooyin la siiyo goobo badan oo lagu soo booqday baaxad weyn maanta, iyo sidoo kale in la sharaxo qaabka ay ugu fududahay dadka qaar inay ku samaystaan ​​ururkan sida ugu fudud uguna dhakhsaha badan ee suurtogalka ah hal xidhiidh oo aad u dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha » Astaamaha Webka: Naqshadeynta iyo Talooyinka Isticmaalka